प्रदेश सरकार पक्षपाती भयोःराजीव कोईराला
प्रदेश १ संसदको पाँचौ अधिवेशन शुरु हुनु अगाडि प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए यसै अधिबेसनबाट प्रदेशको नाम टुङ्गोमा पुग्छ । जसरी राजधानी सहमतिमा टुङ्गो लागेको थियो। त्यसरी नामको बिषय पनि सहमति मै किनारा लाग्छ । तर अधिशेन शुरु भएको महिना दिन बढि हुँदा समेत नामको बिषयले सदनमा प्रवेश पाएन । नामको बिषय यसै अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउने भनिरहँदा प्रदेशको नाम र सरकारको २ बर्षको कामका बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालासँग सञ्चारपाटीले गरेको कुराकानी
यहाँले पनि प्रदेश सभाको यही अधिबेसनबाट नामको बिषय टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर भन्नु भएको थियो । अहिले यस बिषयमा के भइरहेको छ ?
प्रदेश सभाले जे जसरी भएपनि प्रदेशको राजधानीको विषय टुङ्गोमा पुर्यायो । नामको बिषयमा पनि मैले बिषेश समय लिएर यसपालि सक्नु पर्छ भनेर सदनमै भने । नामको बिषय टुङ्गामा लैजानलाई के कारणले अप्प्mठेरो परिरहेको छ ? त्यो कारणको पनि खोजी गरौ । नेपालभरी प्रदेशको नामको बिषय चासोको बिषय बनेको छ । तर यस बिषयमा अहिले सम्म खासै छलफल भएको छैन । तर यही अधिबेशनबाट सवैको चासोको बिषय भएकाले नामको बिषय पनि टुंगोमा लैजानु पर्छ भनेका छौ । यो कांग्रेसको संसदीय दलको आधिकारकि धारणा हो । नामको बिषय टुंगोमा नपुर्याई अरु कुनै उपाय छैन ।
नामको बिषय सजिलै टुंगोमा पुग्छ भन्नु भयो टुंगिन्छ चाँही कसरी ?
प्रदेश सभामा जुन दल अंक गणितका हिसाबले ठूलो छ । जुन दलका सदस्यहरु धेरै छन् । उसले पहल थाल्नु पर्यो । हुन त यो प्रदेश सभाको बिषय हो । तर प्रदेश सभामा यो बिषयालाई प्रवेश गराउन भन्दा अगाडि केहि तयारी छन् भने त्यो तयारी गर्नु पर्यो । केहि गृहकार्य गर्नु छ भने त्यो गृहकार्य गर्नु पर्यो । हामी त छदैँ छौ नी ।
गृहकार्यको कुरा गर्दा अहिले सम्म हामीसँग कुराकानी छलफल केहि पनि भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरुसँग कुराकानी छलफल भएको छ भने मलाई थाहा छैन । तर मुख्यमन्त्रीले नामका बिषयमा छलफल कुराकानी गरेको मेरो जानकारीमा छैन । म सँगचाँही यस बिषयमा कुनै छलफल र कुराकानी भएको छैन । संसदमा रहेका अन्य दलसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ भने मेरो भन्नु केहि छैन ।
नामको बिषयमा अहिले मुख्यतय २ वटा विवाद छ । प्रदेशको नाममा जातिय पहिचान जोड्ने की नदी नाला र भुगोलको नाममा राख्ने भन्ने । यस्तो अवस्थामा कसरी नामको बिषय टुंगो लगाउन सकिन्छ ?
जसले यो मुद्या लिएरे आन्दोलन गरे । द्धन्द गराए यो बखेडा त्यहाँबाट शुरु भएको छ । यसको समाधान पनि तीनै दलहरुले दिनु पथ्र्यो । तर सक्नु भएन । ३ नम्बर प्रदेशलाई बागमती प्रदेश भनियो नी त ! त्यहाँ त समाधान आएन । अर्थात के हो भने साझा पहिचान खोज्नु भयो । हाम्रो त नारा नै छ । द्धन्द मेटिने पहिचान भेटिने । हामी त्यही बाटोमा अगाडि बढ्छौ । बागमती प्रदेशमा पनि अनेक कुरा आएका थिए नी । नेवा प्रदेश, तामाङ्शालिङ् आदि आदि तर त्यहाँ तर त्यहाँ त द्धन्द भएन । त्यसैले जुनबाटोमा जानै सकिदैन त्यस्तो मुद्धा किन उठाउनु ? अहिले नेकपामा बुहमत भएर पनि यही कारणले अप्प्mठेरो परेको होला ।
यदि जातिय पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने हो भने पनि छलफल त अगाडि बढाउनु पर्यो नी । जे राख्दा पनि कुरा त राख्नु पर्यो नी । त्यसपछि नै पार्टीमा पनि यसले कोर्स लिन्छ ।
कुरै अगाडि नआएपछि के कुरा गर्ने ? नेपाली कांग्रेस चाँही नाम के राख्ने भन्ने बिषयमा टुंगोमा पुगिसकेको हो ?
हामी त तयार छौ । नामको बिषयमा पार्टीले पक्कै निर्देशन गर्दैन । यो प्रदेश सभाको बिषय हो । प्रदेश सभाको भएकाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधत्व गर्ने हामी २१ जना प्रदेशसभाले यस बिषयमा टुंगो लगाँउछौ । हामी त अहिले पर्ख र हेरमा छौ । हामी तयार त छौ ।
सरकारको दुई बर्ष
नामको बिषय पछि नेता राजिव कोइरालासँग प्रदेश सरकारको दुई बर्षको कामको बिषयमा पहिलो जिज्ञासा थियो । सरकारले दुई बर्ष कसरी वितायो ?
यसलाई दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ । एउटा के भने नेपालमा संघियता पहिला देखि नै भए जसरी भक्कु आलोचना गर्न सकिन्छ । जस्तो गाविस थियो । नगरपालिका थियो । जिल्ला समिति थियो । सवै कुरा थियो । त्यती भएर पनि प्रदेश सरकारले केहि गर्न सकेन भनेर भक्कुचुर गाली गर्न सकिन्छ । अर्को दृष्टीकोणबाट हेर्दा यो नयाँ अभ्यास भएकाले अहिले म्याचुरेटी बढेको छ । अहिले सम्मको समय हामी सवैले सिप र दक्षतालाई बढाउन खर्च गरेका छौ । यो बाहेक प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार जुटाउन बढि समय लागेको छ ।
यसका बिचमा पनि बजेटहरु खर्च भएको छ । तर प्रवृती उही देखियो । असारमा बजेट खर्च गर्ने । योजना छनौट सहि नगर्ने, हचुवाका भरमा योजना छनौट गर्ने र कहिलै समयमा काम नसक्ने, रकम फ्रिज हुने,रकामान्तर गर्ने, आप्mनो मन्त्रालयमा लाने, पायक परेको स्थानमा लाने विकृती रहेका छन् । तर अहिले पक्ष प्रतिपक्ष सवैले हेर्दाखेरि सन्तोष जनक त भन्न मिल्दैन । तर नयाँ संरचना भएकाले चिन्ता के छ भने हामीले जसरी संघियताको अभ्यास गरिरहेका छौ यही प्रवृतीले संघियता नै फेल त हुँदैन भन्ने हो । यो व्यबस्था चाँही धरापमा नपरोस् ।
नागरिकले चाहेको कुरा त यो होइन नी ?
नागरिकले चाहेको पक्कै होइन । नागरिकले त सिंहदरबार घर घरमै आओस भनेका हुन् । तर सरकारले अहिले पनि विपक्षी अहिले कमजोर छ । कमजोर भएको बेला यसलाई ङ्याकी हाल्नुपर्छ । यही बेला अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने प्रवृती देखाइरहेको छ । मनमानी गरिहल्नु पर्छ भन्ने सरकारको प्रवृती छ । यो दुर्भाग्य हो । सेवा प्रवाहमा अहिले पनि पहिलैकै अवस्था छ । प्रदेश सरकारले ४२ अर्वको बजेट ल्याँउदा पनि काम हुन सकेको छैन । आज सम्म २८ प्रतिसत खर्च भएको छ । मनस्थिती अहिले पनिज किन उस्तै छ भने कृषीमा सरकारले धेरै अनुदान दिइरहेको छ । माछा पालन, दुध,मेसिनरी बाँड्ने लगायतका दुनियाँ भरमा अनुदान दिइरहेको छ । तर त्यहाँ पार्सीलिटी छ . मान्छेलाई बढि दिने प्रतिपक्षीका मान्छेहरुलाई छुनै नदिने । कुरै नसुन्ने । कर्मचारी पनि त्यसैमा दोहोरी गाइरहेको देखिरहेको छु मैले । पोहोर पनि गाई पालक,भैसी पालक किसानहरुलाई अनुदान दिने कार्यक्रम थियो । पोहोर पनि कार्यकर्ता नभएकाले रामाजानकी भैसी पालक समुहलाई अनुदान दिइएन । यस पटक दिनु भएन । कता झापा तिर लैजानु भयो । पाउन त कसैले पायो होला । तर दिने मान्छेको मन त सुद्य छैन । त्यत्रो रकम किन नेपाली कांग्रेसको मान्छेलाई दिने ? त्यस्तो खाले प्रवृतीले हामीलाई कहि पुर्याँउदैन । जसको क्राइट एरिया पुगेको छ । उसलाई दिदाँ के विग्रन्थ्यो ? दुर्भाग्य यही नेर छ । अहिले पनि उही प्रवृती छ । शासन सत्ता परिवर्तन भयो । नयाँ युगमा प्रवेश गर्यौ तर मानसकिता उही छ । अहिलेको सवै भन्दा ठूलो समस्या भनेको मानसिकता फेर्न नसक्नु हो ।